Shirka Ansixinta Dastuurka oo Goordhow ka furmaayo Magaalada Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Shirka Ansixinta Dastuurka oo Goordhow ka furmaayo Magaalada Muqdisho
Muqdisho (Keydmedia Online) - Shirka anxisinta Dastuurka cusub ee Soomaaliya ayaa lagu wadaa inuu goordhow oo saacadaha soo socda ah uu ka furmo Magaalada Muqdisho ee xarunta Soomaaliya, waxaana socda qaban qaabada furitaanka Shirka.
Warar aan ka helnay madasha lagu wado inuu shirka ka furmo ayaa sheegaya in halkaasi ay xaadir ku yihiin qaar badan oo ka tirsan ergooyinka ansxinta Dastuurka ayadoona ergooyinka dhiman ay saacadaha soo socda ay soo gaari doonaan madasha shirka.
Wasiirka Dastuurka Xukuumada KMG ah C/raxmaan Xoosh Jibriil oo hadlay waxaa uu sheegay in 95% ay inta badan xaadir yihiin ergooyinka, waxaana uu sidoo kale sheegay in shirka ansixinta Dastuurka uu socon doona ilaa 1-8-2012.
Sikastaba lama oga inuu wax iska badali doona qabsoomidda shirka ansixinta Dastuurka oo ilaa sadex jeer oo hadda ka hor ah dib u dhacay.
Wararka Shirkaan kala soco [url=http://www.keydmedio.net]http://www.keydmedio.net[/url]